Dhibaatada jibbaarku waxay socon doontaa ugu yaraan illaa bartamaha 2022. | Waxaan ka socdaa mac
Dhibaatada jibbaarku waxay socon doontaa ugu yaraan illaa bartamaha 2022.
Horaan kuugu sheegnay in shirkadaha gacanta ku haya soo saarista jajabka waxay leeyihiin dhibaatooyin xagga saadka ahSidaa darteed, waxaa jira dib udhac soosaarka Chips-yadaas sidaas darteed shirkadaha ubaahan waxay bilaabayaan inay ka walwalaan inaysan haysan agabkii qalabkoodu ku shaqeyn lahaa. Qiimaha ayaa kor u kici doona dhawaan.
Markasta oo aan kugula socodsiinay yaraanta Chips-ka, mid ka mid ah cawaaqibka ka dhalan kara ayaa ah sare u kaca qiimaha aaladaha teknolojiyadda, tusaale Mac, maadaama aysan awood u lahayn inay ku daraan Chips-kan, laguma soo saari karo suuq ku daydo cusub sidaas Waqtiyada dirida ayaa noqon doonta mid aad u weyn qiimuhuna kor ayuu u kici doonaa maadaama shirkadaha ay yeelan doonaan saadaalin iib yar.
Xaaladani waa aafada aaladaha farsamada. Fayrasku hoos uma dhigi karo awooddooda wax soo saar ama shaqo, laakiin qaybaha yar yar ayaa ah waxa dib u dhigi kara. Shirkadaha gacanta ku haya soo saarista Chips-yadaan waxay ka digayaan in la'aantood la maleyn karo taasi waxay socotaa illaa bartamaha 2022.
Yaraanta caalamiga ah ee loo yaqaan 'Chips' ayaa sabab u ah xiritaanka dhirta gawaarida iyo dib u qiimeynta qorshooyinka bilaabista ee sameeyayaasha casriga ah. GlobalFoundries, oo ah shirkadda saddexaad ee ugu weyn adduunka ee macdanta laga qodo, ayaa sheegtay inay qorsheyneyso inay maal gashato $ 1.400 bilyan si loo kordhiyo awoodda wax soo saar dadaal loogu jiro wax ka qabashada dhibaatada socon doonta illaa 2022.
Waxaa jira astaamo muujinaya Apple waxaa laga yaabaa inaysan arkin yaraanta ugu xun. Xaqiiqdii, falanqeeyayaasha qaar waxay aaminsan yihiin in saameynta xaaladan ay ka faa'iideysan karto tufaaxa, laakiin goor dhow ama goor dambe ayay u nuglaan doonaan yaraanta. In kasta oo aan caddeynno in shirkadaha oo dhami ay leeyihiin keyd gaar ah oo ka mid ah goobahan, way yaraanayaan haddii ay jirto baahi xoog leh.
Waa dhibaato caalami ah waana sababtaas darteed, Madaxweyne Joe Biden laftiisa xusay dadaal si kor loogu qaado wax soo saarka semiconductor-ka Mareykanka loona xoojiyo silsiladda sahayda caalamiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dhibaatada jibbaarku waxay socon doontaa ugu yaraan illaa bartamaha 2022.
Erika Clarke iyo Collen Grogan ayaa ku biiraya Apple si loo xoojiyo waxyaabaha mustaqbalka
Ma jiraan wax wadahadal ah oo lala yeeshay Tesla waxayna umuuqataa inaysan jiri doonin.